Masar oo u codaynaysa Dastuurkeeda - BBC Somali - Warar
Masar oo u codaynaysa Dastuurkeeda
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 December, 2012, 10:46 GMT 13:46 SGA
Codbixiyayaasha reer Masar
Masaarida ayaa la waydiiyay inay u codeeyaan maya ama haa dastuurka qabyada ah ee Masar, kaasoo ay dadka aad ugu kala qaybsan yihiin.
Codaynta ayaa ka dhacaysa 17 gobol oo aan codayn toddobaadkii hore. Gobolada maanta codaynaya ayaa loo arkaa inay taageersan yihiin xisbiga Akhwaan Muslimiin.
Taageerayaasha madaxweyne Mursi ayaa sheegay in dastuurka uu soo celin doono deganaanshaha waddanka. Laakiin mucaardka ayaa sheegaya in Dastuurka uu awood siinayo Islaamiyiinta oo uu s ilaalinayn xuquuqda dumarka iyo xoriyada hadalka.
Natiijoooyin aan rasmi ahayn ayaa sheegay in in wareegii koowaad oo codaynta lagu aqbalay dastuurka boqolkiiba konton iyo lix.
Tirada dadka codeeyay ayaa yarayd, mucaaradkana waxay ka cawdeen in aysan si daacad ah u dhicin doorashada.